Agbake furu efu ma ọ bụ ehichapụ data gị iPhone bụ agaghị ekwe omume; anya site ya. Ị dị nnọọ mkpa a ezi omume iji ina malitere, na-achọta otu bụghị ike. A ọtụtụ ndị kweere na mgbe ha na ihichapụ a faịlụ site ha iPhone, ọ na-arahụ ihe ọma. Otú ọ dị, nke ahụ abụghị ikpe. The data-anọgide na gị iPhone / iPad / iPod Touch si ike mbanye ruo mgbe ọ na overwritten site ọhụrụ data n'ọnọdu-ya. Ya mere, na-agba ọsọ a mgbake omume bụ nnọọ irè dị ka ogologo oge ọ mere dị ka ngwa ngwa o kwere mee mgbe nhichapụ. Ahọpụta ndị kasị mma iPhone data mgbake software pụrụ isi ike, tumadi n'ihi n'oké ọnụ ọgụgụ nke iPhone data mgbake omume dị nnọọ elu. Sitere na site mfe freeware ka ọkaibe, na-akwụ ụgwọ omume, ị na-ahọrọ nri iPhone mgbake software bụ ihe siri ike nhọrọ. Otú ọ dị, ebe a bụ nke 3 nke kasị mma iPhone data mgbake ngwá ọrụ ndị ị nwere ike ịhọrọ site:
Top 3: Oxygen Forensices maka iPhone
Top 1: Wondershare Dr.Fone maka iOS
The Oxygen Forensics maka iPhone bụ otu nke kasị mma iPhone data mgbake software omume ugbu a. Ọ bụghị nanị na ọ bụ ike nke na-agbake data gị iPhone, ma ihe omume na-enyekwa sara mbara 'forensic' ihe ọmụma banyere gị iDevice, sitere na site web njikọ nkwurịta okwu stats, wdg A ikpe mbipute nke usoro ihe omume dị kwa.
- Enye gị zuru ezu nghọta na gị na ekwentị
- Naghachi data mfe
- na-egosi ọmụma na a nnọọ simplistic n'ụzọ.
1. Zuru ezu analysis na stats
2. Nwekwara ike ịrụzi rụrụ arụ data
1. Interface abụghị ka dị mfe
2. A otutu-enweghị isi ọmụma
3. Adịghị mma maka ojiji nkeonwe
4. Oke ọnụ ($1.299)
iRecovery Stick bụ ihu ọma a USB flash mbanye na-abịa ihe gụnyere software usoro. Ọ bụ nke ukwuu ike iPhone mgbake software, dị ka ọ pụrụ mfe iṅomi ọdịnaya nke gị iPhone / iPad na mgbe ahụ download ndị ọdịnaya na kọmputa gị. I nwekwara ike naghachi ehichapụ data gị iPhone na a okwu nke nkeji. Usoro ihe omume atụmatụ a mara mma mfe iji interface, otú oru -ndị na-adịghị chọrọ iji nweta ya na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ nwekwara ike adịrị ndabere faịlụ na kọmputa gị. Ebe a na-ya kacha mma atụmatụ:
- Easy iji interface.
- All ke kiet ke otu ngwọta maka gị iDevice.
- Ntụle ehichapụ faịlụ tupu mgbake, ikwe ọrụ iji họrọ ihe ha chọrọ iji naghachi.
1. Recovers data n'ụzọ dị irè
1. Na-achọ ihe ọzọ USB mbanye (nke bụ na-enweghị isi)
2. A bit oké ọnụ ($ 169.99)
The Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) bụ magburu onwe iPhone mgbake software na-enye nnọọ apụtakarị arụmọrụ iji iOS ọrụ. Ị nwere ike wepụ backups si iTunes iji usoro ihe omume, nọ na-agbake ehichapụ data gị iDevice nwere ike ịbụ ihe ọ bụla mfe; dị nnọọ Jikọọ na ngwaọrụ gị, na-agba ihe omume ka ọ na-eme ya ọrụ.
- Atọ mgbake mode: wepụ iTunes ndabere, wepụ iCloud nkwado ndabere na mpaghara kpọmkwem naputa site na iDevices
- Data nwere ike previewed tupu mgbake
- Mmemme adịghị weghara a otutu Mgbakọ ego.
1. Recovers data na zuru
2. Nnọọ mfe interface
3. Dakọtara na a nnukwu iche nke ngwaọrụ
4. A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke formats na-akwado
1. Ọ dịghị onye
Olee otú ndabere iPhone 4S Notes on Computer Tupu iOS 6 Update
> Resource> iPhone> 3 Best iPhone Data Recovery Software maka 2015